Famaranana ny jobily faha-15 taona – FJKM Ambavahadimitafo Famaranana ny jobily faha-15 taona |
Fankalazana ny famaranana ny jobily faha-XV taonan’ny Sampana Fifohazana ny Alahady 22 Marsa 2009 nanomboka tamin’ny 2 ora sy sasany tao amin’ny Akany Daniel RALIBERA
Isaorana anie Andriamanitra fa tontosa soa-aman-tsara ny fotoanan’ny alahady hariva namaranana ny fankalazana ny faha-XV taona niorenan’ny Sampana Fifohazana Ambavahadimitafo! Marobe tokoa ny olona nanatrika io fotoana tolakandro io.
Nanomboka tamin’ny 2 ora sy sasany mahery kely ny fotoana.
Rehefa natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana fohy notarihin’ny Mpitandrina Rakotonoeliarimanana dia nanolotra ny fotoana rehetra ny Filohan’ny SAFIF Ambavahadimitafo, Ramatoa Rabetsitonta Noromanalina.
Mialohan’ny famekabelaran-kevitra (tapany voalohany) hataon’ny Mpitandrina Razafiarison Emilien dia nifandimby nitsangana nandray anjara ny antoko mpihira telo trano:
Ny AMA (Antoko Mpihira Ambavahadimitafo) : “Ry olona ô! Moa fantatrao izay atao hamonjena anao? “
Ny antoko mpihira Maintimolaly Ambohitantely : “Saingy tsy foinao”
Ary ny antoko mpihira Ilo Fitiavana avy any Andriampamaky : “Io sitraponao io”.
Ny loha-hevitry ny famelabelarana dia ny hoe « Aiza no hiafaran’ny lalanao? »
Tao aorian’ny famelabelarana dia nanao hira ny antoko mpihira telo trano:
Maintimolaly Ambohitantely : “Sambatra ny manana an’i Jesoa”
AMA : “Hangina aho ry Tompo “
Ilo Fitiavana: “Satria Jesoa tsy ilaina” ary “Jeso no làlana”.
AMA : “Jeso irery ihany no làlana “
Namarana sy nanome tso-drano ny Mpitandrina Rakotonoeliarimanana rehefa nisaotra ny rehetra ny mpanolotra.